i-pixel 3 ishisa futhi ivale phansi ngenkathi ishaja abanye abanikazi
none Izindaba Nokubuyekezwa I-Pixel 3 iyashisa futhi iyavala ngenkathi ishaja abanye abanikazi
Ama-Google & apos; s I-Pixel ama-Smartphones athathwa njengamanye amahle kunawo wonke emhlabeni we-Android, kodwa ngeshwa, uhlelo & apos; s lonakaliswe umlando ka izingqinamba zangemva kokuqaliswa . Sesibonile abanye abasebenzisi bePixel 3 nePixel 3 XL bethukuthela izingqinamba zokuphathwa kwememori , kodwa imibiko yakamuva ikhombisa ukuthi kungaba khona inkinga enkulu nakakhulu ekuqedeni.
Abanikazi abaningi bePixel 3 bathi idivayisi yabo ishisa kakhulu ibe namazinga ayingozi ngenkathi ikhokhiswa. Ngokusobala, ukwenza izenzo ezithile njenge amakholi evidiyo , ukubukela ukusakaza bukhoma , noma ngisho lalele umculo ngenkathi ishaji ingadala ukuthi ifoni encane yePixel ishise ngokweqile, ize ifike lapho lapho ucingo luzivalela khona ukuvimbela ukulimala okuqhubekayo. Ngokusobala, inkinga ivela kakhulu lapho ihendisethi isetshenziswa nePixel Stand yeGoogle & apos; noma ihlanganiswe nenye ishaja engenantambo, kepha izikhalazo nazo zingena zivela kubantu abathembele kumashaja wezinkampani zangaphandle anentambo.
Ukusebenzisa ifoni yakho ngenkathi ibhethri ligcwaliswa nakanjani kungayenza ifudumale kancane, kepha lawa macala wePixel 3 ngokuqinisekile awajwayelekile. Imvamisa, lapho ihendisethi iqala ukushisa, abasebenzisi bazothola kuqala isaziso. Uma ukushisa kuqhubeka, amanani okushaja ancipha futhi inqubo ingayeka noma ngabe ishaja iyasetshenziswa njengamanje. Njengesinqumo sokugcina, ifoni iyazivalela ukuvimbela ukulimala okubucayi noma, esimweni esibi kakhulu, ukuvutha okungenzeka kwebhethri.
Okwamanje, le nkinga ingahle ihlukaniswe yizingxenye ezimbalwa ezinamaphutha, futhi siyethemba ukuthi izohlala injalo. Futhi, okwamanje azikho izimpawu zokuthi iPixel 3 XL enkulu iyathinteka. Uma lokhu kuyinkinga yesoftware, iGoogle kungenzeka ikhiphe ukulungiswa ezinsukwini ezizayo. Uma kungenjalo, inkampani kufanele ngokushesha ikhiphe imiyalo yokuthi ingalusingatha kanjani lolu daba. Sizoqinisekisa ukukugcina wazi.
Ngabe uhlangabezana nezinkinga ngePixel 3 yakho? Sazise kumazwana abekiwe!
ikhona i-5g eduze kwami
I-xperia xz premium us usuku lokukhishwa
Indaba engcono kakhulu eqhutshwa imidlalo ye-android mahhala
Ungakhubaza kanjani i-bloatware ku-Samsung Galaxy S III yakho: izinhlelo zokusebenza ziphephile ukususa
Nakhu kanye okudingayo ukufinyelela i-Verizon & apos; inethiwekhi ye-5G ezweni lonke namuhla (noma okungenani kusasa)
I-Apple ifuna i-iPhone 4S yakho esetshenzisiwe, igcina kuze kufike ku- $ 345 yayo
I-Bash Script - Sawubona Isibonelo Somhlaba
Thumela ifoni yakho ye-Android emuva ngesikhathi ngokufaka lewijethi
I-horror: Intengo ye-iPhone 7 nosuku lokukhishwa e-UK, Germany, France, China, Japan nakwamanye
Amacala amahle kakhulu we-LG G7 ThinQ njengamanje: mncane, uyisitayela, uyazivikela
I-Amazon ibhala kabusha i-FreeTime ku-Amazon Kids, ingeza izici ezintsha
Umngcele we-Samsung Galaxy S6 vs Samsung Galaxy S5
I-Verizon iqala ukubuyekeza i-Samsung Galaxy S4 iye ku-Android 5.0.1 Lollipop